नरेन्द्र मोदीको नारामा नयाँ शक्तिको अभियान ! - HAMRO YATRA
नरेन्द्र मोदीको नारामा नयाँ शक्तिको अभियान !
काठमाडौं । दुई वर्ष अघि मात्र भारतमा आफ्नो चुनावी यात्रामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नारा थियो– ‘सबका साथ, सबका विकास’ । दुई वर्षपछि यो नारा नेपालमा भित्रिएको नयाँ शक्तिका नाममा र यसलाई आफ्नो भनी प्रचार गरे बाबुरामले । उनको नारा हो ‘अबको विकास, आर्थिक विकास ।’ फरक रह्यो भाषाको , त्यहाँ हिन्दी भाषामा यो नारा लाग्यो भने यहाँ नेपालीमा ।
विकासको कुरा जसले पनि गर्न हुन्छ । तर ठ्याक्कै अरु कसैले भनेको कुरा केवल भाषामा उल्था गरियो भने त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ । यो चाही भएन । मोदीले यो मरो नारा हो किन चो¥यौं नभन्लान तर अरुलाई त कता कता किरिकिरी लाग्ने नै भयो त्यो पनि खुलारुपमै ।
लेखक अमरदीपलाई असह्य नै भएछ लेखिहाले । नयाँ शक्तिका प्रस्तावक बाबुराम आफ्नै विगतलाई कहिल्यै नहेर्ने मध्येमा पर्छन् । तर कुनै पनि मान्छेसँग उसको विगत झुण्डिएकै हुन्छ, उसको प्रत्यक्ष परिचय बनेर ।
त्यसकाराण त्यो व्यक्ति विगतको गुणदोषकै मूर्ति भने हुन्छ । उनले विगतमा जे गरे त्यो काम गलत थियो तर उनले त्यसलाई कहिल्यै गलत मानेनन्ु । माओवादी जनयुद्धकालमा १७ हजारको रगत बगाएर त्यसको जिम्मेवारी लिन्न भनी भाग्न मिल्छ ? टिप्पणीकारहरुले सँधै यो प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, उत्तर चाहि पाएका छैनन् ।
अब यो प्रश्न उनीसँग मात्र सीमित रहेन । जस्तो सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद ठोकेका अपराधीलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन भनी वक्तव्य निकाले, त्यो कुरा उनको मात्र नभएर यो पार्टी सदस्य हौं भन्ने सबै यसमा सहमत भएको मान्नुपर्छ र तिनले केही पहिले यसरी नै सार्वजनिक स्थलमा देशको प्रचलित कानुन मान्छु भनी खाएको सपथ केही दिनकै अन्तरमा उल्टाएको बुझ्नुपर्छ । त्यसो हो भने जेठ ३० मा रंगशालामा खाएको सपथको अर्थ के रह्यो ? आजको आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।
विज्ञापन शैली पनि उस्तैः